सनराईज युथ सिरहाद्धारा महिलालाई प्याड बनाउने तालिम
तालिमको क्रममा विभिन्न ठाउँबाट सहभागी गराइएकी महिलाहरुलाई महिनावारी हुँदा पुनः प्रयोग गर्ने मिल्ने प्याड बनाउन इलम सिकाएको जनाइएको छ ।
२०७७ चैत ८ आइतबार
न्यूज ब्यूरो, सिरहा । “स्वस्थ्य महिला, स्वस्थ्य परिवार, स्वास्थ्य समाज” मूल नारा का साथ सनराइज युथ सिराहा सञ्जालद्वारा महिनावारी सरसफाइ तथा पुन प्रयोग प्याड बनाउने तालिम दिइएको छ ।
महिनावारीको समय मा प्रयोग गर्ने बजारमा विभिन्न कम्पनीका सिनेटरी प्याड उपलब्ध भएपनि सबैको पहुँचमा आर्थिक दृष्टिकोणले नहुने गरेको भन्दै घरमै प्याड बनाउने तालिम दिएको हो ।
गाउँस्तरमा अधिकांश ठाउँमा पसलमा समेत प्याड नै नपाउने तथा कम्जोर आर्थिक अवस्थाका कारण कतिपयले उपभोग गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण महिनाबारीको समयमा गन्दा कपडा प्रयोगले सँक्रमणको जोखिम हुने गरेको भन्दै प्याड बनाउने तालिम दिइएको हो ।
“कपडा प्रयोग गर्दा समस्या मात्र हुँदैन संक्रमण को जोखिम पनि हुन्छ । यसैलाई ध्यानमा राख्दै “स्वस्थ्य महिला, स्वस्थ्य परिवार, स्वस्थ्य समाज” मूल नाराको साथ “महिनावारी सरसफाइ तथा पुन प्रयोग प्रयोग प्याड बनाउने तालिम” दिएको हो ।
“बजारमा पाइने प्याड एकपटक प्रयोग गरेपछि अर्को पटक प्रयोग गर्न मिल्दैन । तर कपडाको प्याड लाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो तालिम लिएपछि सुई,धागो , टाक, कैची, भएपछि घरकै कपडाले बनाउन सकिन्छ । कपडा को प्याड बनाउन सहज र कम खर्चिलो पनि हुन्छ र साथै कसैको मदत बिना पनि यो प्याड बनाउन सकिन्छ।”– सँजालले जनाएको छ ।
उक्त तालिम मिर्चैया नगरपालिका वडा नम्बर ११ सनिगढवा गाउँको दलित बस्तीमा आयोजना गरिएको थियो । सँजालको आयोजनामा “मधेशी युवा एकता समाज सेवा” को सहयोग र प्याडबैंकको प्रविधिक सहयोगले सम्पन्न भएको थियो ।
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । कोभिडको महामारीमा सँजीवनको रुपमा आश्रय दिदै आएको जनकपुरको प्रादेशिक अस्पतालमा एक कोरोना विरामीको मृत्यू भएपछि तोडफोड गरिएको छ । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको कोभिड अस्पतालमा मँगलबार (आज) साँझ
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । कोभिडको महामारीमा सँजीवनको रुपमा आश्रय दिदै आएको जनकपुरको प्रादेशिक अस्पतालमा एक कोरोना विरामीको मृत्यू भएपछि तोडफोड गरिएको छ ।
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको कोभिड अस्पतालमा मँगलबार (आज) साँझ करिब ५ः३० बजेको समयमा प्रादेशिक अस्पतालको कर्मचारीलाई हातपात सहित भेन्टिलेटर समेत तोडफोड गरिदिएको हो ।
अस्पतालका मेडिकल सुरिटेन्डेन्ट डा. प्रमोद यादवका अनुसार, जलेश्वर अस्पतालबाट रिफर भएर जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याइएका महोत्तरी सुगा निवासी एक विरामीलाई भेन्टिलेटरमा राखेपछि मृत्यू भएको थियो ।
भेन्टिलेटरमा राखेर उनको उपचार सुरु गरेपछि केही बेरमै उनको मृत्यू भएपछि आक्रोसित परिवारजनले अस्पतालमा तोडफोड गरेको हो । तोडफोडको क्रममा २ वटा भेन्टिलेटर क्षतिग्रस्त भएको मेसु डा.यादवले जानकारी दिए ।
कोभिड अस्तालमा कार्यरत नर्सिँग र केही अन्य कर्मचारीलाई हातपात गरेको बताइएको छ । केही नर्सलाई कुटपिट सहित कर्मचारीलाई समेत कुटपिट गरेको मेसु यादवको कथन छ । सो क्रममा दुई जना कर्मचारी घाईते भएको जनाइएको छ ।
“यस्तो सँवेदनशिल अवस्थामा कोभिड अस्पतालमा खटेका कर्मचारीहरु भगवान भन्दा कम होइनन्, बचाउने त हर सम्भव प्रयास गरेकै थियो, तर आक्रोसमा आएर कर्मचारीलाई कुटपिट गर्नु अहिलेको परिवेशमा कसैले किन काम गर्ने त ? अब उनीहरु कोभिड अस्पतालमा काम नगर्ने भनेर गएका छन् ? अब अझै के हुन्छ हालात ?– डा. यादवले भने ।
अस्पतालमा तोडफोड सहित कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने मृतकका दुई आफन्तजनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाएको जनाइएको छ ।